फेरि राजा आउदै ? भर्खरै बुटवलमा जनता सबै निस्किए … – PathivaraOnline
Home > समाचार > फेरि राजा आउदै ? भर्खरै बुटवलमा जनता सबै निस्किए …
रुपन्देहीमा राजाको सक्रिय भूमिकाको माग गर्दै आज बृहत् मोटरसाइकल र्‍यालीको आयोजना गरिएको छ ।
वीर गोर्खाली नामक संस्थाको आयोजनामा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने मणिग्राणदेखि बुटवलका विभिन्न स्थानमा मोटरसाईकल र्‍यालीको आयोजना गरिएको हो । र्‍याली ट्राफ्रिक चोकमा आएर कोषसभामा परिणत भएको थियो ।
उक्त अवसरमा वीर गोर्खालीका अभियन्ता बिक्रम पाण्डेयले राजसंस्थाको आवश्यकता अहिले झन् झन् बढेको दावी गरे । उनले हिन्दु अधिराज्य कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय अखण्डता कायम हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए ।
यसअघि असोज २४ गते काठमाडौंमा पनि यस्तै र्‍यालीको आयोजना गरिएको थियो । संस्थाले यस्तो अभियान देशका अन्य ठाउँहरु पनि गर्ने जनाएको छ ।
अढाई वर्षीय दुधे बालकको घाँटी रेटी बलि दिइ धामी फरार,खुल्यो यस्तो रहस्य – भिडियो हेर्नुहोस